gbasara iwu Disclaimer
Site n'iji weebụsaịtị anyị na ịtụ ngwaahịa anyị ị kwenyere na usoro ndị a
Gafere afọ 18
N’okpuru ọnọdụ ekwesighi iji ngwaahịa anyị mee ihe n’ule mmadụ ọ bụla na UK na enweghị Home Office ma ọ bụ ikike MHRA. Ha abụghị Ngwaahịa Ọgwụ Nyocha.
A na-ere ngwaahịa SARMS anyị naanị maka ebumnuche nyocha.
Ngwaahịa niile akpọsaara, rere ma ọ bụ kpọtụrụ aha na weebụsaịtị a bụ ESLỌ ỌRAB AKWABKWỌ AKWHEKWỌ
Usoro zuru ezu na ọnọdụ nke nkwekọrịta nkwekọrịta: Ndị ahịa niile aghaghị ịdịkarịa ala 18 afọ ịzụta ngwaahịa anyị.
Biko Gụọnụ ma tụlee usoro na ọnọdụ ndị a na-eji nkwekọrịta eme ihe n'ụzọ zuru oke tupu iji saịtị a na saịtị ndị ejikọtara ọnụ.
Site n'iji saịtị weebụ a, ị kwenyere na Usoro na Ọnọdụ ojiji. Ọ bụrụ na ikwenyeghị, biko pụọ ma leghara ozi dị n'ime anya.
www.sarmsstore.co.uk nwere ikike ịgbanwe Usoro na Ọnọdụ ojiji nkwekọrịta, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ ya, n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa amara gị. N'ihi ya, ị kwesịrị ị na-enyocha peeji a tupu iji Web Site na ọrụ a iji hụ na ị ghọtara usoro a na-enye gị ohere ịnweta.
Ojiji nke weebụsaịtị anyị belụsọ na akọwapụtara n'ụzọ ọzọ, ojiji nke weebụsaịtị a na-achịkwa Usoro na Ọnọdụ ojiji yana weebụsaịtị Nzuzo Weebụsaịtị, nke edepụtara na nke a. N'iji webụsaịtị a, amachibidoro gị ịgbanwe, kesaa, zipu, mepụtaghachi, mbipụta, ikikere, ịnyefe ma ọ bụ ire ozi ọ bụla, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ enwetara ma ọ bụ lelee na weebụsaịtị a. Agbanyeghị, ịnwere ike igosipụta, budata ma ọ bụ bipụta akwụkwọ siri ike nke ihe ọ bụla dị na weebụsaịtị a maka ojiji nkeonwe gị, nke na-abụghị nke azụmahịa ọ bụrụhaala na ị naghị agbanwe ọdịnaya ahụ ma ọ bụ hichapụ ikike nwebisiinka ọ bụla, ụghalaahịa ma ọ bụ ọkwa ikikere ndị ọzọ. Amachibido ojiji ọ bụla nke ozi dị na weebụsaịtị a na-enweghị nkwenye ederede ederede anyị.
Iji ozi nke weebụsaịtị a na-enye, ọ bụ ezie na ọ bara uru, agaghị eji ya dị ka onye nnọchi maka ndụmọdụ nke ndụmọdụ gị. Ozi ezighi ezi sitere na webụsaịtị a abụghị nke aga-eji chọpụta ihe gbasara ahụike ma ọ bụ ọrịa ọ bụla. A na-ere ngwaahịa na weebụsaịtị a maka naanị ebumnuche nyocha. www.sarmsstore.co.uk nwere ikike idozi ihe ọ bụla na-ezighi ezi ma ọ bụ ndenye ederede na ozi ahụ edepụtara na saịtị weebụ a, ọ gaghị enwe ụgwọ ọ bụla maka ụdị njehie a. Enwere ike gbanwee ma ọ bụ emelite ozi na enweghị ọkwa na ọnụahịa yana nnweta ngwaahịa na ọrụ ga-agbanwe na-enweghị ọkwa.
ADGH OFF INYE ỌZỌ.
Ọdịnaya ahụ bụ maka ebumnuche ozi naanị na ezubere iji nye gị ndụmọdụ a kapịrị ọnụ, na ekwesịghị ịdabere na nke ahụ. Ikwesighi ime ihe ma obu ịdabere na ọdịnaya a n'ejighi ntuziaka nke onye okacha amara.
Ngwaahịa ndị e rere na weebụsaịtị a bụ maka nyocha nke naanị.
Here ga-esi kwenye inemnify na jide www.sarmsstore.co.uk, na ndị enyemaka anyị, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị ọrụ, ndị na-emekọ ihe, ndị mmekọ na ndị ọrụ enweghị mmerụ na nkwupụta ọ bụla, gụnyere ụgwọ ọka iwu nwere ezi uche nke ndị ọzọ mere n'ihi ma ọ bụ na-esite n'iji ọdịnaya gị na weebụsaịtị a. , ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla ị nyefere, biputere, ma ọ bụ bufee site na weebụsaịtị a, ojiji nke weebụsaịtị a, njikọ gị na weebụsaịtị a, mmebi iwu nke Usoro na Ọnọdụ ojiji, ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla nke onye ọzọ.
Njikọ / SOFTWARE.
Njikọ sitere na ma ọ bụ weebụsaịtị ndị dị na mpụga weebụsaịtị a bụ maka naanị mma. www.sarmsstore.co.uk anaghị enyocha, na-akwado, na-akwado ma ọ bụ na-achịkwa, na ọ bụghịkwa maka saịtị ọ bụla ejikọtara na weebụsaịtị a, ọdịnaya nke saịtị ndị ahụ, ndị ọzọ akpọrọ n'ime ya, ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ijikọ saịtị ọ bụla ọzọ nọ n'ihe ize ndụ gị yana www.sarmsstore.co.uk agaghị aza ajụjụ ma ọ bụ buru ibu maka mmebi ọ bụla metụtara njikọ. www.sarmsstore.co.uk ma wepu ikike niile, gosipụta ma gosipụta na izi ezi, izi ezi na iwu nke ihe ọ bụla ma ọ bụ ozi dị na saịtị ndị ahụ. Njikọ nbudata na ebe nrụọrụ weebụ na-ebudata ihe dị mma naanị www.sarmsstore.co.uk enweghị ọrụ ma ọ bụ buru maka nsogbu ma ọ bụ nsogbu ọ bụla metụtara nbudata ngwanrọ ahụ. Iji sọftụwia ọ bụla ebudatara na-achịkwa usoro nkwekọrịta nkwekọrịta, ma ọ bụrụ na ọ dị, nke na-eso ma ọ bụ nye ya na ngwanrọ ahụ.
B OFR OF ITBỌR O ANYUR
Weebụsaịtị a dị maka ndị ọrụ iri abụọ na anọ (24) kwa ụbọchị, ụbọchị asaa (7) kwa izu, ụbọchị narị atọ na iri isii na ise (365) kwa afọ. Otú ọ dị, www.sarmsstore.co.uk nwere ikike ịme ka weebụsaịtị anyị ghara ịdị na oge ọ bụla, maka ebumnuche ọ bụla, yana ogologo oge ọ bụla. Site n'iji webụsaịtị a ị kwenyere na www.sarmsstore.co.uk agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla na-esite ma ọ bụ metụtara ụdị nkwụsịtụ, nkwusioru, ma ọ bụ nkwụsị nke weebụsaịtị a na / ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa dị n'ime ya. Mgbe ị nabatara usoro na ọnọdụ ojiji a www.sarmsstore.co.uk na-enye gị ikike ịlele Ọdịnaya na weebụsaịtị naanị maka ojiji gị. A na-ezube ihe dị na weebụsaịtị naanị maka ndị mmadụ na-ajụ maka ya www.sarmsstore.co.uk Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ịbanye na weebụsaịtị ahụ maka ebumnuche ndị a, ị nwere ike iji weebụsaịtị ugbu a. N’ezie, amachibidoro ndị na-abụghị ndị mmadụ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ya, ndị ọka iwu ma ọ bụ ndị nnọchi anya ndị na-abụghị ndị mmadụ.
OZI I NA-EME.
www.sarmsstore.co.uk ma ọ bụ nchịkọta anyị na / ma ọ bụ ojiji nke ozi ọ bụla ị nyere mgbe ị na-eji ma ọ bụ na-eleta weebụsaịtị a ka ndị na-achịkwa www.sarmsstore.co.uk Iwu Nzuzo na Usoro na Ọnọdụ nke Iji Agreement. Site na iji weebụsaịtị a ị nyere anyị ikike dị n'ime ya. Na iji weebụsaịtị a ị gaghị ebugo, kesaa ma ọ bụ bipụta na weebụsaịtị a ozi ọ bụla nwere ike ịlele dị ka ihe rụrụ arụ, nkwutọ, obi ọjọọ, iyi egwu, mkparị, iwu na-akwadoghị, mwakpo nke ikike nzuzo ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ nwee ike bụrụ ma ọ bụ gbaa mmebi iwu nke iwu ọ bụla. Ewezuga ozi amata n'otu n'otu nke anakọtara site na gị dịka Iwu Nzuzo anyị, nkọwa niile, nkwupụta, aro, echiche ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ekwusara ga-abụ naanị ihe onwunwe nke www.sarmsstore.co.uk I nye kwa ha ihe www.sarmsstore.co.uk a na-enweghị akwụ ụgwọ ọbụla, nke na-adịru mgbe ebighi ebi, nke a na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe, nke zuru ụwa ọnụ, nke na-abụghị sọọsọ ikikere iji ma ọ bụ mụta otu. www.sarmsstore.co.uk nweere onwe ya idetuo, igosipụta, kesaa ma ọ bụ nyochaa ozi ọ bụla maka ihe ọ bụla na ebumnuche niile, ọ nweghịkwa ụgwọ iji kwụọ gị ụgwọ maka ozi ọ bụla.
IKpe akwụkwọ ikike.
www.sarmsstore.co.uk na-enye ọdịnaya na saịtị weebụ a dị ka ọrụ maka gị, ndị ahịa anyị. Ebe nrụọrụ weebụ a enweghị ike ma ọ nweghị, nwere ozi gbasara ngwa niile maka ngwaahịa ere. O nwere ike ọ gaghị ebu ozi niile gbasara ọnọdụ gị ma ọ bụ otu esi ere ngwaahịa gị. Ọdịnaya nke weebụsaịtị a, sava weebụ nke na-eme ka ọ dịrị, yana ọrụ na ngwaahịa www.sarmsstore.co.uk a na-enye na webụsaịtị a, enyere na “dị ka ọ dị” na “ka ọ dị” na-enweghị akwụkwọ ikike n'ụdị ọ bụla, ma ọ bụ nkwuputa, nke egosiputara ma ọ bụ iwu. www.sarmsstore.co.uk na-ekwupụta n'ụzọ doro anya ụgwọ maka ọdịda ọrụaka (gụnyere ngwaike ngwanrọ ma ọ bụ ngwanrọ), ezughi ezu, kpachara ma ọ bụ na-egbu oge na-enyefe kọmputa, yana / ma ọ bụ na-ezighi ezi na teknụzụ, yana ịnweta ikike nke ndị ọrụ nke ndị ọzọ. Ọzọkwa, www.sarmsstore.co.uk anaghị anọchite ma ọ bụ nye ikike na agaghị ebute nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emebi ma ọ bụ na-ebibi ihe, ma ọ bụ na enweghị mmebi ọ bụla ga-eme na sistemụ kọmputa gị. Have nwere ọrụ dịịrị naanị maka nchekwa na nkwado ndabere nke data na / ma ọ bụ akụrụngwa yana iji nlezianya niile wee nyochaa kọmputa ma ọ bụ ihe mbibi ndị ọzọ. Site n'iji saịtị weebụ a, ị kwenyere na iji ụdị a dị naanị gị n'ihe egwu, gụnyere ọrụ maka ụgwọ niile metụtara ọrụ niile dị mkpa ma ọ bụ nrụzi nke akụrụngwa ọ bụla ị na-eji na njikọ weebụsaịtị. Ruo oke iwu anaghị egbochi ya www.sarmsstore.co.uk, ndị ndụmọdụ ndụmọdụ ahụike ha, ndị na-ebubata ya, ndị ndụmọdụ, ndị isi na ndị ọrụ na-ajụ ma wezuga akwụkwọ ikike niile gbasara ọdịnaya ọ bụla, kwupụtara, echiche ya ma ọ bụ iwu. Nkwupụta a gụnyere, mana ọnweghị oke, ikike na ikike ọ bụla na ikike ọ bụla, ịdị mma maka otu ebumnuche, yana mmebi iwu. www.sarmsstore.co.uk anaghị enye ikike ọdịnaya iji bụrụ nke ziri ezi, nke zuru ezu ma ọ bụ nke dị ugbu a. www.sarmsstore.co.uk anaghị enye ikike na weebụsaịtị a ga-arụ ọrụ na-enweghị njehie, na a ga-edozi ntụpọ ma ọ bụ na weebụsaịtị a ma ọ bụ sava weebụ na-eme ka ọ dịrị enweghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Ọnụahịa na nnweta ọdịnaya, yana ọdịnaya ndị ọzọ dị na weebụsaịtị a ma ọ bụ nweta ya, enwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa. ị kwenyere ma kwenye Tupu i jiri ngwaahịa ọ bụla ịkwesịrị ikwenye ozi ọ bụla dị gị mkpa na ngwugwu ngwaahịa a. Assume were ibu ọrụ maka izi ezi,
Tupu imalite iji ngwaahịa ọ bụla ịkwesịrị ikwenye ozi ọ bụla dị gị mkpa na ngwugwu ngwaahịa a. You na-eburu ibu ọrụ maka izi ezi, kwesịrị ekwesị na izi ezi nke ozi ọ bụla ị na-eweta www.sarmsstore.co.uk. dị ka ele mmadụ anya n’ihu maka nnweta websaịtị a yana iji ọdịnaya ya, ị kwenyere na ya www.sarmsstore.co.uk ọ gaghị akwụ gị ụgwọ n'ụzọ ọ bụla n'agbanyeghị mkpebi ị nwere ike ịme ma ọ bụ omume gị ma ọ bụ omume gị ịdabere na ọdịnaya ahụ. i kwenyere na mkpokọta nke ibu nke www.sarmsstore.co.uk sitere na ma ọ bụ metụtara na ojiji gị na nnweta n'agbanyeghị ụdị omume ma ọ bụ nkwupụta (dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta, akwụkwọ ikike, mmekpa ahụ, nleghara anya, ibu ọrụ siri ike, omume ezighi ezi, aghụghọ, ma ọ bụ ntọala ndị ọzọ maka azịza), ejedebere na ọnụahịa ịzụta nke ihe ọ bụla ị zụrụ si www.sarmsstore.co.uk na azụmahịa bara uru.www.sarmsstore.co.uk agaghi anodu obula kwesiri iburu ya ihe obula, nke putara ihe, nke puru iche, nke puru iche, ma obu nke ojoo obula ma oburu na www.sarmsstore.co.uk A dụọla ọdụ banyere ohere nke mbibi dị otú ahụ. Nke a bụ oke mmachi nke ibu ọrụ nke metụtara ọghọm na mmebi nke ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na afọ ojuju na weebụsaịtị a ma ọ bụ ọdịnaya ya (gụnyere usoro ojiji), naanị otu ọgwụgwọ gị bụ ịkwụsị iji weebụsaịtị a. N'ihi na ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mwepu ma ọ bụ mmachi nke ibu ọrụ maka mmebi mebiri ma ọ bụ nke nwere ike ịda, ụdị mmachi ahụ nwere ike ọgaghị emetụta gị.
Ngwaahịa anyị na-enye na-ezube maka ụlọ ọrụ nyocha iji naanị.
Na ịzụta nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, onye ahịa ahụ kwetara na enwere nsogbu dị na oriri ma ọ bụ nkesa nke ngwaahịa ndị a. Achọghị ọgwụ ndị a iji mee ihe dị ka mgbakwunye nri, ọgwụ, ihe ịchọ mma, kemịkalụ ụlọ ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ndepụta nke ihe dị na saịtị a apụtaghị ikikere iji ya emebi iwu nke ikike ọ bụla. A ga-edozi ngwaahịa niile naanị ndị ọkachamara ruru eru ma zụọ nke ọma. Ndị ahịa niile na-anọchite ma na-enye ikike na site nyocha na nyocha nke onwe ha na ha maara nke ọma ma mara nke ọma banyere ihe ndị a: Iwu gọọmentị gbasara iji na ikpughere ngwaahịa niile. Ihe ọghọm ahụike na nchekwa metụtara ijikwa ngwaahịa ndị ha zụrụ. Mkpa ọ dị nke ịdọ aka na ntị zuru oke banyere ihe egwu ahụike na nchekwa metụtara ngwaahịa ọ bụla. www.sarmsstore.co.uk nwere ikike igbochi na / ma ọ bụ ịgọnahụ ire ere nke ndị ọ bụla na-erughị eru ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe mere anyị ga-eji kwenye na iji ojiji eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma.
www.sarmsstore.co.uk ezubere ngwaahịa naanị maka ebumnuche nyocha ụlọ nyocha yana belụsọ na ekwuru n'ụzọ ọzọ ekwesighi iji maka ebumnuche ndị ọzọ, gụnyere ma ọnweghị oke ebumnuche vitro, na ọgwụ nri, ngwaọrụ ọgwụ, ma ọ bụ ihe ịchọ mma maka ụmụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ maka ebumnuche azụmahịa. Onye zụrụ ihe ahụ kwenyere na e meghị ka ọgwụ ghee ma ọ bụ nwalee ngwaahịa ndị a www.sarmsstore.co.uk maka nchekwa na nrụpụta ọrụ na nri, ọgwụ, ngwaọrụ ahụike, ịchọ mma, azụmahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Onye zụrụ ihe na-anọchi anya ya ma nye ya ikike www.sarmsstore.co.uk na onye zụrụ ihe ga-anwale, jiri, rụpụta ma zụọ ngwaahịa ọ bụla zụrụ site na ya www.sarmsstore.co.uk na / ma obu ihe ndi emeputara na ngwaahịa zutara www.sarmsstore.co.uk dịka omume nke onye a pụrụ ịtụkwasị obi nke nwere ahụmahụ n'ọhịa na nrube isi siri ike na iwu na ụkpụrụ niile dị mkpa, ugbu a na nke ugbu a etinyere. Onye zụrụ azụ na-ekwusi ike na ihe ọ bụla mepụtara ngwaahịa ọ bụla agaghị agagharị ma ọ bụ mebie aha ya na ihe Iwu Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ga-abụrịrị ihe agaghị enwe, n'okpuru ngalaba 404, 505, ma ọ bụ 512 nke Iwu ahụ , webata ya na ahia etiti obodo. Onye zụrụ ahịa ghọtara na, ebe ọ bụ www.sarmsstore.co.uk ngwaahịa bụ, belụsọ na ekwuputaghị n'ụzọ ọzọ, ezubere maka naanị maka ebumnuche nyocha, ha nwere ike ọ gaghị adị na ndepụta nchịkọta ihe metụtara toxic bekee (TSCA). Onye zụrụ ihe na-eburu ibu ọrụ iji jide n'aka na ngwaahịa ndị a zụtara n'aka www.sarmsstore.co.uk kwadoro maka ojiji n'okpuru TSCA, ọ bụrụ na ọdabara.
Onye zụrụ ihe nwere ibu ọrụ iji nyochaa ihe egwu ndị ahụ ma mee nyocha ọ bụla ọzọ dị mkpa iji mụta ihe egwu metụtara iji ngwaahịa zụtara site na www.sarmsstore.co.uk. Ọ dịghị ngwaahịa zụtara si www.sarmsstore.co.uk A ga-ewere, belụsọ na ekwuru n'ụzọ ọzọ, ka nri, ọgwụ, ngwaọrụ ahụike ma ọ bụ ihe ịchọ mma. Ngwaahịa na ọrụ niile enyere bụ maka Nchọpụta Naanị. N'okpuru Ọnọdụ ọ bụla a ga-eji / eji ihe ọ bụla mee ihe maka nzube ntụrụndụ ma ọ bụ oriri mmadụ. na www.provenpeptides.com anaghị akwụ ụgwọ maka Ọ B forLA mmebi nke enwere site na nleghara anya, mmegbu, ma ọ bụ Ọ B otherR other na ihe ndị ọzọ a na-atụghị anya ha.
EJI NA UMUAKA.
Na ịzụta ngwaahịa ndị a, onye ahịa ahụ kwetara na enwere ihe egwu metụtara ya. Ahịa na-anọchi anya ma na-enye anyị ikike na site na nyocha nke onwe nke ndị ahịa na ọmụmụ ihe ha maara nke ọma na ihe ọmụma banyere:
(M). Ihe ize ndụ ahụike na nchekwa metụtara na njikwa nke ngwaahịa ndị a zụtara;
(II). Nchịkwa ịdị ọcha nke ụlọ ọrụ dị mkpa iji kpuchido ndị ọrụ ya n'ihe egwu ahụike na nchekwa dị otú ahụ;
(III). Mkpa ọ dị ịdọ aka na ntị nke ọma maka nsogbu ahụike na nchekwa metụtara ngwaahịa; na
(IV). Iwu gọọmentị, gbasara iji yana ikpughere ụdị ngwaahịa a. Anyị nwere ikike igbochi ire ngwaahịa ma ọ bụ ịre ndị na-erughị eru ahịa ngwaahịa.
Nzaghachi ọ bụla site na email ma ọ bụ biputere gbasara anụmanụ gị na iji M / m / m / m na gị ma ọ bụ nke gị na-ezo aka na TISSUE SAMPLES na isiokwu nyocha. Nzaghachi anyị Adabaghị na iji mmadụ mee ihe, n'ezie, emela ihe ọ bụla megidere iwu na ihe ọ bụla na weebụsaịtị a.
Onye zụrụ ihe nyere ikike na ha na ụlọ ọrụ nyocha, ụlọ ọrụ, mahadum ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha ndị ọzọ metụtara nke zụrụ na ojiji nke ngwaahịa ndị ere www.sarmsstore.co.uk, naanị maka ebumnuche nyocha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye ọ bụla zụta site na www.sarmsstore.co.uk nke ahụ ekwubeghị njikọ, ha ga-eme aghụghọ aghụghọ nke a ga-aza ha maka ya.www.sarmsstore.co.uk nwere ikike ịrụsi ọrụ ike nyocha na ozi enyere iji lelee izi ezi. www.sarmsstore.co.uk naanị ya nwere ezi uche, nwere ike ịchọ nkwenye ọzọ nke mgbakwunye tupu ịtụ mmezu.
Usoro na ọnọdụ na usoro ọ bụla etinyere ma ọ bụ zoro aka na ebe a bụ nkwekọrịta niile n'etiti www.sarmsstore.co.uk na ị metụtara ị na-eji weebụsaịtị Weebụ na isiokwu a, ma dochie nghọta ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla (ma ọ bụ kọmputa, ederede ma ọ bụ ederede) gbasara isiokwu ahụ, enwere ike ghara ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ma e wezụga ederede, ma ọ bụ site na www.sarmsstore.co.uk ime mmeghari ma obu mmeghari di otu a Usoro na Ojiji nkwekorita.
VERBVERR SE NDVER.
Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke Usoro na Ọnọdụ nkwekọrịta a na-ahụta ma ọ bụ kpebisie ike na-agaghị ekwe omume, mgbe ahụ, a ga-ewepụ ma ọ bụ belata oke akụkụ dị otu a. Fọdụrụ nke Usoro na Ọnọdụ Ojiji a, gụnyere akụkụ ọ bụla edegharịrị, ga-adị ma na-arụ ọrụ na mmetụta zuru oke. Usoro a na Usoro Ojiji nke nkwekọrịta bụ nkwekọrịta niile dị n'etiti anyị na-achịkwa iji ojiji nke Weebụ a.
Isiokwu ndị dị na Usoro Usoro na Ọnọdụ ojiji na Iwu Nzuzo N'ebe nrụọrụ weebụ bụ maka ntụnye naanị.
IKE KA IKE.
www.sarmsstore.co.uk agaghị ebu iwu maka igbu oge ọ bụla ma ọ bụ ọdịda ọ bụla na arụmọrụ kpatara site na ọnọdụ karịrị ikike ya, gụnyere, na-enweghị njedebe, igbu oge n'ihi iwu azụ nke ngwaahịa achọrọ, oge izipu ozi, igbu oge omenala ma ọ bụ mbubata efu.www.sarmsstore.co.uk Agaghị enwe ọrụ iji gwa Onye Ahịa ahụ ma ọ bụrụ na igbu oge dị otú ahụ. Ahịa ahụ ga-abụ naanị ọrụ ịme ndokwa ndị ọzọ iji zụta ngwaahịa ndị ọzọ na ụgwọ ọ bụla metụtara metụtara ụdị ịzụrụ ihe.
EGO zuru ezu.
Ewezuga otu esi gosipụta ya na “ọkwa iwu” na Saịtị a, Usoro na Ọnọdụ ndị a bụ nkwekọrịta niile dị n’etiti gị na Saịt a n’ihe gbasara iji saịtị a, yana Ọdịnaya. Site na ịpị "Ekwenyere m" mgbe ị na-etinye iwu gị, ị kwenyere na Usoro Mbupu na nkwụghachi anyị.
Anyị na-enye ozi metụtara mmadụ iji ntuziaka maka ndị nyocha iji nyochaa ma nye aka nyocha ụlọ nyocha.
Ọnweghị n'okpuru ọnọdụ ka ere ngwaahịa ndị a maka oriri mmadụ, anyị ga-akagbu iwu ọ bụla anyị nwere ike inyo enyo site na iji nzube a.
Ndị ahịa niile kwesịrị ịgba mbọ hụ na kemịkal ọ bụla enyere anyị iwu bụ iwu n'obodo ha.
Ndị ahịa UK kwesịrị ịmara na ugbu a SARMS abụghị ihe a na-achịkwa n'okpuru Iji Iwu Ọgwụ Ọjọọ na 1971 or Ihe Nlekọta Ihe Nlekọta Ọrịa 2016
Biko egbula ihe ọ bụla azụpụtara n'ime weebụsaịtị a maka iji mmadụ, n'ihi na nke a ga-abụ iwu na-akwadoghị n'okpuru Iwu ọgwụ 1968
Anyị anabataghị ọrụ ọ bụla metụtara oriri mmadụ, na-ejedebeghị na: Mmerụ ahụ, ọnwụ, nkwarụ, nrụgide, ụkọ ego.
A na-ejikwa weebụsaịtị a www.sarmsstore.co.uk. Na saịtị niile, okwu ahụ “anyị”, “anyị” na “nke anyị” na-ezo aka na Sarms Store. Lọ ahịa Sarms na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwaọrụ na ọrụ dị na saịtị a n'aka gị, onye ọrụ, dabere na ịnabata usoro, ọnọdụ, atumatu na ọkwa niile ekwuputara ebe a.
Anyị debere ikike ịjụ ihe ọ bụla ị ga - etinye na anyị. Anyị nwere ike, naanị na anyị nwere ezi uche, machibido ma ọ bụ kagbuo ọtụtụ zụrụ nke onye ọ bụla, kwa ụlọ ma ọ bụ n'usoro. Mgbochi ndị a nwere ike ịgụnye iwu nyere ma ọ bụ n'okpuru akaụntụ ahịa ndị ahụ, otu kaadị akwụmụgwọ ahụ, na / ma ọ bụ iwu ndị na-eji otu ịgba ụgwọ na / ma ọ bụ akwụkwọ mbupu. Ọ bụrụ na anyị gbanwee ma ọ bụ kagbuo iwu, anyị nwere ike ịnwa ịgwa gị site na ị kpọtụrụ adreesị ozi-e na / ma ọ bụ ịgba ụgwọ / nọmba ekwentị nyere n'oge a nyere iwu ahụ. Anyị debere ikike ịgba ma ọ bụ gbochie iwu na, na ikpe ikpe anyị, ọ dị ka ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ekesa.
Ị kwenyere na ihe ị na-ekwu agaghị emebi ikike ọ bụla nke ọ bụla ọzọ, gụnyere nwebisiinka, ụghalaahia, nzuzo, àgwà ma ọ bụ ikike onwe onye ma ọ bụ ikike. Ị kwenyere na ihe ndị ị ga - aza agaghị enwe nnwere onwe ma ọ bụ n'ụzọ iwu akwadoghị, okwu mkparị ma ọ bụ ihe rụrụ arụ, ma ọ bụ nwee kọmputa ọ bụla ma ọ̄ bụ malware ndị nwere ike n'ụzọ ọ bụla emetụta ọrụ nke Ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya. Ị nwere ike ghara iji adreesị ozi-e ụgha, mee ka à ga-asị na ị bụ onye ọzọ karịa onwe gị, ma ọ bụ na-eduhie anyị ma ọ bụ nke atọ ọzọ dịka mmalite nke ihe ọ bụla. Naanị gị bụ maka ihe ọ bụla ị kwuru na ha ziri ezi. Anyị enweghị ibu ọrụ ọ bụla ma ghara itinye ụgwọ maka ihe ọ bụla ị kwuru ma ọ bụ nke ọ bụla ọzọ.
Onweghi otu Sarms Store, ndi isi anyi, ndi isi anyi, ndi oru anyi, ndi ozo, ndi n’enye oru, ndi oru ngo, ndi ulo oru, ndi na enye ahia, ndi n’enye oru ma obu ndi na enye ha ikike gha enwe ntaramahuhu maka ihe ojoo obula, ntufu, nkwuputa, ma obu uzo ozo ma ọ bụ mmebi ọ bụla nwere nsogbu ọ bụla, gụnyere, na-enweghị mmachi uru furu efu, ego furu efu, nchekwa furu efu, ọnwụ data, ụgwọ ngbanwe, ma ọ bụ mmebi ọ bụla yiri ya, ma ọ dabere na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere ileghara anya), ụgwọ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-esite iji ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ewepụtara site na iji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọ bụla ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla iji ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, mana ọnweghị oke, njehie ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla, ma ọ bụ mfu ọ bụla ma ọ bụ mmebi n'ụdị ọ bụla dakwasịrị n'ihi iji ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, nyefee, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ ewepụtara site na ọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a dụọ ha ndụmọdụ banyere ohere ha nwere. N'ihi na ụfọdụ steeti ma ọ bụ ikike anaghị ekwe ka mwepu ma ọ bụ njedebe nke iwu maka ihe ọghọm ma ọ bụ mmebi mebiri, n'ụdị steeti ma ọ bụ ikike ndị ahụ, ụgwọ anyị ga-ejedebe ruo oke iwu nyere ikike.
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ, chebe ma jidekwa ụlọ ahịa Sarms na-enweghị mmerụ ahụ na nne na nna anyị, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ikikere, ndị na-enye ọrụ, ndị na-arụ ọrụ n'okpuru, ndị na-eweta ọrụ, interns na ndị ọrụ, enweghị mmerụ ọ bụla na nkwupụta ma ọ bụ ọchịchọ ọ bụla ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke onye ọ bụla ọzọ mere n'ihi ma ọ bụ na-esite na ngabiga nke Usoro Ọrụ a ma ọ bụ akwụkwọ ha tinyere site na nrụtụ aka, ma ọ bụ mmebi iwu gị ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Usoro Okwu a na nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị na-enye gị Ọrụ ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu nke United Kingdom.
Ajuju gbasara Usoro Ọrụ ka ezigara anyị na sales@sarmsstore.co.uk